Izindaba - Isitsha Esiguquguqukayo Esiphakathi Nezimo
I-WhatsApp: +86 156 0555 2333
Isitsha Esigcwele Esiphakathi Nezimo
I-FIBC (isiqukathi senqwaba esiphakathi nendawo esiguqukayo), i-jumbo, isikhwama senqwaba, isaka elikhulu, noma isikhwama esikhulu, yisiqukathi sezimboni esenziwe ngendwangu eguqukayo eyenzelwe ukugcina nokuhambisa imikhiqizo eyomile, engahambeki kalula, enjengesihlabathi, umanyolo, kanye nezinhlamvu zepulasitiki .
I-FIBC ivame ukwenziwa ngemicu eminyene elukiwe ye-polypropylene ekhonjiwe, eboshwe, futhi ngokujwayelekile ilinganiselwa kuma-45–Amasentimitha angama-48 (114–122 cm) ububanzi futhi buhluka ngobude ukusuka ku-100 kuye ku-200 cm (39 kuya kuma-79 inches). Umthamo wayo uvame ukuzungeza i-1,000 kg noma i-2,200 lb, kepha amayunithi amakhulu angagcina ngisho nangaphezulu. I-FIBC eyenzelwe ukuhambisa ithani elilodwa lemethrikhi (amathani ayi-0.98 amade; amathani ayi-1.1 amafushane) wezinto uqobo lizoba nesisindo esingu-5 kuphela–7 lb (2.3–3.2 kg).
Ukuthuthwa nokulayishwa kwenziwa kuma-pallet noma ngokukuphakamisa kusuka kuluphu. Izikhwama zenziwa noma ngabe iluphu eyodwa, ezimbili noma ezine zokuphakamisa. Isikhwama esisodwa seluphu silungele ukusebenza kwendoda eyodwa njengoba singekho isidingo sendoda yesibili yokufaka izihibe kulokhuku lokulayisha. Ukukhipha kwenziwa lula ngokuvula okukhethekile ezansi njengokukhipha okukhiphayo, okukhona kukho izinketho eziningi, noma ngokumane ukusike kuvulwe.
Lolu hlobo lokupakisha, isikhwama se-jumbo, lu-eco-friendly. Inezendlalelo ezimbili ukuthi ungqimba lwangaphakathi lungadliwa ngo-100% kanti olungaphandle luyaphinde lusetshenziswe kabusha. Uma kuqhathaniswa nezigubhu zensimbi ezintsha, ukumoshwa kwayo kucishe kube zero futhi akuvuzi.
Izinhlobo ze-Flexible Intermediate Bulk Container
Ezemithi - zifana nezitifiketi zebanga lokudla
I-UN iqinisekisiwe - kuzofanele ihlolwe kaningi ukuqinisekisa ukuthi iyakwazi ukumelana nengcindezi futhi isuse nokuchithwa kwezinto ezibonakalayo eziyingozi
IBanga Lokudla - kufanele lenziwe endaweni ehlanzekile yegumbi okuvunyelwe i-BRC noma i-FDA
I-FIBC enomoya - isetshenziselwa amazambane nezinye izithelo / imifino ukuvumela umkhiqizo ukuthi uphefumule
Ukulungiswa okuhlukile kwe-loop loop:
4 Phakamisa izihibe
Izinhlobo zamaluphu ophakamisa
Amaluphu ajwayelekile wokuphakamisa
I-cross corner lift loops
Izikhwama ze-FIBC ezinama-Liners
Imikhiqizo eshunqa uthuli noma enobungozi kuzodingeka ukuthi ibe ne-polypropylene liner ngaphakathi kwe-FIBC ukuqeda ukuhlungwa kwe-FIBC ephothiwe.
Izindwangu zingenziwa nge-Polypropylene, Polyethylene, Nylon, noma i-liner yensimbi (Foil)
Uhlobo - A - azikho izici zokuphepha ezikhethekile ze-electrostatic
Uhlobo - B - Uhlobo B lwezikhwama alukwazi ukukhiqiza ukusakazwa kokukhishwa kwebhulashi. Udonga lwale FIBC lukhombisa ukuphazamiseka kwamandla ka-4 kilovolts noma ngaphansi.
Uhlobo - C - I-FIBC ehambisanayo. Yakhiwe ngendwangu ehamba ngogesi, eyenzelwe ukulawula izindleko ze-electrostatic by grounding. Indwangu ejwayelekile esetshenzisiwe iqukethe imicu eqhubayo noma itheyiphu.
Uhlobo - D - Ama-anti-static FIBCs, empeleni abhekisa kulezo zikhwama ezinezakhiwo zokulwa nokuma okungama-static ngaphandle kwesidingo sokubekwa phansi.
Isikhathi Iposi: Jun-03-2019